अनौपचारिक र औपचारिक संस्थाहरूको: अवधारणा, लक्ष्य र उद्देश्य
समाचार र समाज, संगठन मा Obdinenie
अर्थव्यवस्था अप विभिन्न संस्थाहरू को गतिविधिहरु बनेको छ। अनौपचारिक र औपचारिक संस्थाहरूको आर्थिक प्रणालीको आधार हो। तिनीहरू फरक संरचना, को विविध हुन सक्छ लक्ष्य र उद्देश्य, तर आफ्नो मुख्य उद्देश्य - उत्पादन र व्यापार गतिविधिहरु भाग।
संगठन को अवधारणा
यस्तो अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन रूपमा विषयों को चौराहे मा गठन भएको संगठन बारे प्रस्तुति। अन्तर्गत यो बुझ्ने गरिन्छ र जसमा एक प्रक्रिया सिर्जना र नियन्त्रण गरिन्छ कुनै पनि प्रणाली, र संयुक्त काम को पाठ्यक्रम विभिन्न प्रणाली र समूहहरू केही अन्तरक्रियामा एक संग्रह, र कुनै पनि समस्या को बोध लागि सँगै मान्छे ल्याएर। समुदाय, निगम र संगतले: परंपरागत, ऐतिहासिक संगठन को तीन प्रकार छन्। सिद्धान्त को आन्तरिक संरचना आधारमा अनौपचारिक र औपचारिक संस्थाहरूको छन्। तर कुनै पनि मामला मा, तिनीहरूले साधारण लक्ष्य र उद्देश्य द्वारा एकताबद्ध मानिसहरूको समूह हो। संगठन को मुख्य विशेषता सामाजिक महत्त्वपूर्ण साझा लक्ष्य को उपलब्धि को पीछा सँगै कार्य गर्ने केही मानिसहरू छ छ। संगठन जटिल संरचना र प्रजाति को ठूलो संख्या हो।
संगठन को संरचना
संगठन को अध्ययन को जटिलता उनि एक अत्यन्तै विविध संरचना द्वारा प्रतिष्ठित छन् भन्ने छ। यो एक जटिल, परस्पर सिस्टम विभिन्न कार्यहरु र संरचना संग तत्व हो। उत्पादन प्रक्रिया को आन्तरिक तर्क, यो उद्यम को कार्यात्मक विशेष झल्काउँछ र आर्थिक र आर्थिक समस्या सबैभन्दा प्रभावकारी समाधान सुविधा डिजाइन गरिएको छ गर्न संगठनको संरचना विषय हो।
परंपरागत, संगठन संरचना एक नियन्त्रण रूपमा हेरिएको छ। लागत कम गर्न तर्कसंगत संगठनात्मक संरचना - संगठनात्मक संरचना कार्यहरू र कम्पनी को गतिविधिहरु को व्यवस्थापनमा परिभाषित गरिएको छ, यो आर्थिक कारक प्रभावित छ। साथै, संगठनात्मक संरचना नियन्त्रण फारम, व्यक्तिगत कार्यात्मक एकाइहरु, श्रम को विभाजन, बाह्य वातावरण, विधि सम्बन्ध कर्मचारी व्यवस्थापन रणनीति को centralization को डिग्री जस्ता कारक प्रभावित छ।
संगठन को संरचना निर्णय-महत्वपूर्ण उत्पादन र व्यवस्थापन निर्णय को प्रभावकारिता र दक्षता बढाउँछ। संगठनात्मक संरचना बजार मा कम्पनीको प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्न, लचिलो, तर स्थिर हुनुपर्छ।
संगठन संरचना को प्रकार
को अध्ययन मा संगठनात्मक संरचना , त्यहाँ धेरै नजिकिंदै छन्। सबै प्रक्रिया को कार्यान्वयन आधार हो कि सामाग्री वस्तुहरु र प्रक्रियाहरू को एक प्रणाली - संगठन संरचना को प्राविधिक पक्ष मा। प्राविधिक संरचना कर्मचारी बीच कार्यात्मक सम्बन्ध लागि, सामग्री र कामको प्रकृति मा प्रभाव, संगठन सामाजिक संरचना मा कर्मचारी र प्रभाव बीच व्यक्तिगत र काम सम्बन्ध प्रकार निर्धारण आधार प्रदान गर्दछ।
संगठन सामाजिक संरचना र पारस्परिक र intergroup अन्तरक्रियामा कवर, र लक्ष्य, मान, शक्ति विस्तार। सामाजिक संरचना धेरै कारक प्रभावित छ: नेतृत्वको क्षमता र रणनीति र सम्बन्ध, विश्वसनीयता, व्यावसायिकता, कर्मचारीहरु को, सामूहिक रचनात्मक र व्यावसायिक क्षमता मा नैतिक र मनोवैज्ञानिक जलवायु, आफ्नो पहल, क्षमता र औद्योगिक समस्या बनाउने अपरंपरागत तरिकाहरू गर्न इच्छा निर्माण गर्न आफ्नो क्षमता।
यस संगठनको संरचना को तेस्रो घटक - sociotechnical, यो संरचना आफ्नो interconnections सुनिश्चित, आफ्नो जब कर्मचारीहरु एकत्र को स्थानिक तरिका हुन्छन्।
व्यवस्थापन मा कम्पनी को संगठनात्मक संरचना पदानुक्रमित र adhokraticheskie भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पालो मा, पदानुक्रमित संरचना रैखिक, कार्यात्मक, रैखिक-कार्यात्मक, मंडल र अरूलाई विभाजित। एक जैविक म्याट्रिक्स, डिजाइन र ब्रिगेड विभाजित छन्।
पदानुक्रमित संरचना एक साधारण हो संगठनों को प्रकार तिनीहरूले को पाठ्यक्रम बिस्तारै विकसित व्यवस्थापनको विकास। Linear संगठनात्मक संरचना सरल र सरल उत्पादन चक्र संग कम्पनीहरु को लागि विशिष्ट छ। यी संस्थाहरूको मा, सबै चक्र जो, बारी मा, उच्च व्यवस्थापकलाई विषय हो टाउको, अन्तर्गत संयुक्त छन्। एकाइ आफ्नो विभाग को काम को लागि पूर्ण जिम्मेवारी वहन। यो संरचना को फाइदा प्रत्येक एकाइ र यसको प्रबन्धक कुशल vzaimopodchineniya प्रणाली र वितरण कार्य, प्रत्येक लिंक को नेताहरूको जिम्मेवारी को क्षेत्र स्पष्ट को स्पष्ट प्रभावकारिता छ। यस्तो संगठनात्मक संरचना को बेफाइदा प्रत्येक जो समस्या solves समग्र रणनीतिक व्यवस्थापन एकाइहरु, को जटिलता छन्, तर सानो रणनीतिक योजना, आन्तरिक र बाह्य परिवर्तन, व्यावसायिकता को प्रबन्धकहरू देखि परिणाम निर्भरता को उच्च डिग्री गर्न गरिब लचीलापन र उत्तरदायित्व को कार्यान्वयन मा समावेश। कार्यात्मक संगठनात्मक संरचना रैखिक एकाइहरूको अलग सिद्धान्त देखि, त्यो कार्यहरू आधार सिर्जना फरक। यस्तो संगठनों मा, त्यहाँ अक्सर निकै व्यवस्थापन complicates जो नै कलाकार, एक क्रस-पुस्तिका छ। Linear र कार्यात्मक संरचना - तिनीहरूले आधुनिक आवश्यकताहरु व्यवस्थापन पूरा भएकोले, विगतमा, नियन्त्रण विधिहरू मा छोडेर छ।
Linear-कार्यात्मक संरचना, दुई अघिल्लो प्रकार जोडती यस मामला मा, लाइन प्रबन्धकहरू कार्यात्मक एकाइहरु को गतिविधिहरु भर पर्छन्। यी संरचना कुनै 3,000 भन्दा बढी मानिसहरूको कर्मचारी संग उत्पादन प्रक्रिया को समान प्रकारको लागि उपयोगी छन्। यस्तो संरचना को बढी आधुनिक प्रकार जो प्रत्येक गतिविधि बनाएको छ मुख्यालय, आधारभूत समस्या समाधान गर्न प्रबन्धकहरू मद्दत गर्छ एक linearly-कर्मचारी संगठन हो। मंडल संरचना जटिल उत्पादन चक्र संग ठूलो कम्पनीहरु द्वारा विशेषता। विभाजन म - एक उत्पादन एकाइ, आफ्नो टीम को काम को लागि पूर्ण जिम्मेवार छ जो एक नेता द्वारा लाग्यौं। प्रभाग एक क्षेत्रीय आधारमा विनियोजन गर्न सकिन्छ (यो बुझ्ने शाखा सिस्टम छ) वा उत्पादन। पदानुक्रमित संगठन संरचना स्थिर छन्, तर एक परिवर्तन वातावरण प्रभाव अन्तर्गत लचीलापन को एक कम डिग्री। यस्तो संरचना अक्सर निर्णय, bureaucratic बाधाओं को अवधि छ।
जैविक संरचना कमीकमजोरी को वर्गीकरणका हटाउन डिजाइन, तिनीहरूले विशिष्ट परिस्थिति सिर्जना र कुनै पनि परिवर्तन गर्न चाँडै प्रतिक्रिया हो, adaptability - यो आफ्नो मुख्य फरक र फाइदा छ। Brigadnaya फरक तेर्सो संरचना कर्मचारी काम समूह मुछिएको। यस्तो संरचना को फाइदा क्षमता, गति निर्णय-बनाउने प्रभावकारी प्रयोग हो, तर त्यहाँ सबै टोली समन्वय को जटिलता मा झूठ र रणनीतिक लक्ष्य हासिल कठिनाइ छन्। त्यसै गरी त्यहाँ परियोजना संरचना, wherein को एक निश्चित कार्य को कार्यान्वयन अन्तर्गत चयन काम समूह। कार्यात्मक सेवा र परियोजनाहरू वा कार्यक्रम: म्याट्रिक्स वा कार्यक्रम-लक्ष्य संरचना तत्व को दुई प्रकार हुन्छन्। तिनीहरूलाई त्यहाँ एक डबल पेश्की छ, र यस्तो संगठनों को कमी छ। तर फाइदा व्यवस्थापन, दक्षता, उच्च प्रदर्शन, विकास रणनीति संग वर्तमान समस्या अन्तरक्रिया को दक्षता छ।
साथै, संगठनको संरचना औपचारिक र अनौपचारिक विभाजन गरिएको छ। औपचारिक - यो कुनै पनि कागजात मा निश्चित छ जो संरचना, अनौपचारिक संरचना छ - यो spontaneously टोलीमा भित्र समूह मा कर्मचारीहरु र आफ्नो विभाजनको सम्बन्ध विकास गरे। मुख्य संरचना अनौपचारिक सामाजिक सम्बन्ध हो। आवश्यकता खडा गर्दा अनौपचारिक समूहहरु, spontaneously हुन्छन्, त्यसैले मोबाइल र एक अनुकूली संरचना छ। स्थिति आधारमा, यस्तो समूह मा शक्तिहरु र कार्यहरु को वितरण सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
को उद्देश्य र संगठनको कार्यहरू
अनौपचारिक र औपचारिक संस्थाहरूको एक विशेष उद्देश्य को नाम मा बनाईएको हो, र तिनीहरूले कम्पनी को प्रकार र संरचना निर्धारण। यो संगठन एक जटिल र विविध उद्देश्यका द्वारा विशेषता छ साधारण ज्ञान छ, यी समावेश:
रणनीतिक लक्ष्य। वैश्विक, दीर्घकालीन कम्पनी को लक्ष्य को निरूपण - शीर्ष व्यवस्थापन को गतिविधिहरु को एक महत्वपूर्ण भाग हो। यी लक्ष्यहरू कम्पनीको बजार मा लामो अवधि वृद्धि मा स्थिति, यसको छवि, महत्वपूर्ण औद्योगिक र व्यावसायिक प्रदर्शन समावेश गर्नुहोस्।
सामरिक उद्देश्य। वैश्विक लक्ष्य हासिल गर्न बाटो सधैं अल्पकालीन लक्ष्य को उपलब्धि मार्फत छ। लक्ष्य यस प्रकारको लागि विकास समग्र रणनीतिक दिशा मा फिट गर्न निश्चित हो कि निरन्तर र परिचालन चुनौतीहरू छन्।
आर्थिक लक्ष्य। कुनै पनि संगठन नै व्यावसायिक लाभ को लक्ष्य छ, तिनीहरूले संख्यात्मक मूल्य मा व्यक्त हुनुपर्छ: राशि र समय मा हासिल गर्न।
उत्पादन लक्ष्य। यस कम्पनीको विकास आधुनिकीकरण र उत्पादन को सुधार बिना असम्भव छ। उपकरण खरिद, प्रविधिहरू विकास, कार्यान्वयन को नयाँ क्षेत्रहरु को लागि खोज - यो सबै उचित विनिर्माण रणनीति मा।
सामाजिक लक्ष्य। कर्पोरेट संस्कृति को गठन को लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने, समाज र संस्कृति मा प्रभाव - यो सबै पनि संगठन को एक महत्वपूर्ण भाग हो।
को औपचारिक संगठनको उद्देश्य सामान्यतया चार्टर मा निश्चित र ideological र प्रकृति मा प्रेरक छ छन्, यो कम्पनीको मिशन सम्बन्धित हुनुपर्छ। उद्देश्य अनौपचारिक समूह सामान्यतया लेखन मा निश्चित र रूपमा साधारण मान र चासो प्रकट छैन। संगठन को सबै उद्देश्य, तिनीहरूलाई आधारित महत्व क्रममा रैंकों र, रणनीति र रणनीति काम तैयार।
विशेषताहरु र संगठन को विशेषताहरु
यस संगठन बीच महत्वपूर्ण मतभेद भए तापनि तिनीहरूले कुनै पनि निहित विशेषताहरु साझेदारी गर्नुहोस्। संगठन को मुख्य विशेषता - लक्षित को उपस्थिति, यसको सबै सहभागीहरू नजिक छ।
एक औपचारिक संगठन को एक महत्वपूर्ण विशेषता - यसको कानुनी स्थिति र अलग। संगठन यसको विशेष स्थिति प्रदान गर्दछ जो व्यवस्थापन एक औपचारिक-स्थिर फारम, हुनुपर्छ। अलग पनि संगठन र बाहिर संसारमा बीच सीमा सिर्जना गर्न आन्तरिक प्रक्रियाहरू को उत्पादन र प्रबंधन को समापन प्रतिबिम्बित गरिएको छ। मानव, आर्थिक, भौतिक, सरकार संगठन एक स्रोत रूपमा शक्ति हुन सक्छ: - संगठन को अर्को साइन यो स्रोतको उपलब्धता अपरिहार्य छ। संगठन यसलाई जिम्मेवारी को आफ्नो क्षेत्र छ र आफ्नै मुख्य निर्णय लिन्छ, आत्म-नियम जस्ता विशेषताहरु छ। तर त्यो जो आफ्नो गतिविधिहरु प्रभावित बाह्य वातावरण, निर्भर रहन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण सुविधा उपस्थिति छ संगठनात्मक संस्कृति कि कर्पोरेट मान्यता, परम्परा, संस्कार, मिथक को रूप मा अवस्थित छ।
औपचारिक संगठन को संकेत
थप साधारण सुविधाहरू विशेषता औपचारिक संगठन यसको आफ्नै विशिष्ट सुविधाहरू छ। विभिन्न परिस्थितिमा उनको कार्य को एक निश्चित पाठ्यक्रम सल्लाह दिन्छन्, निर्देशन, विनियम, कानून, विनियम: यी सुविधाहरू पहिलो यसको गतिविधिहरु विनियमन कागजातहरू एक सेट को उपस्थिति छ। त्यसैले, यसको गतिविधिहरु सुरुमा zaformalizovana। संगठन र को औपचारिक संरचना अनौपचारिक समूह समावेश, तर यसको औपचारिक घटक सधैं प्रवल छन्। तसर्थ, औपचारिक संगठन सधैं व्यापक र थप अनौपचारिक छ।
अनौपचारिक संगठन को संकेत
अनौपचारिक संगठन को अद्वितीय विशेषताहरु यसको antipode देखि यो भेद। यी विशेषताहरु समावेश:
सार्वजनिक नियन्त्रण उपलब्धता। अनौपचारिक संगठन स्वीकृत र अस्वीकृत व्यवहार पहिचान गर्न, सदस्यहरू र बाह्य वातावरण स्थिर पर्यवेक्षण अन्तर्गत छन्। अनौपचारिक समूह को सदस्य, केही व्यवहार ढाँचाको prescribes को मान्यता र समूह सदस्य पर्खन्छ को नियम देखि deviating लागि इन्साफ वा समूहबाट पनि expulsion।
परिवर्तन को बाधा। अर्को सुविधा अनौपचारिक समूह समूह आत्म-संरक्षण र यसको अस्तित्व एउटा खतरा रूपमा विचार परिवर्तन गर्न tends, परिवर्तन गर्न आन्तरिक प्रतिरोध छ।
अनौपचारिक नेताहरूको उपस्थिति। यस्तो समूह को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता उपस्थिति छ अनौपचारिक नेताहरूले। को को नेता समूह - यो यस्तो संगठन को एक संरचना-निर्मित तत्व छ, तिनीहरूले केही अधिकार र जिम्मेवारी प्रत्यायोजित, र उहाँले समूहका सदस्यहरू बीच भरोसा र पहिचान छ।
संगठन को प्रकार
कि बाहेक त्यहाँ जारी गर्न र गर्न सक्छन् अन्य प्रजाति, औपचारिक र अनौपचारिक संगठन हो। तिनीहरूले उद्योग द्वारा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ: .. व्यापार, उत्पादन, मध्यस्थता, सेवा, आदि संगठन को कानूनी स्थिति अनुसार व्यावसायिक र गैर-व्यावसायिक भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। उत्पादन को मामला मा, साना मध्यम र ठूलो संगठन रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ। आधारभूत वर्गीकरण गर्ने औपचारिक संस्थाको मुख्य सम्बन्धित, तर केही प्रजातिहरु अनौपचारिक समूहमा अवस्थित सक्छ।
आन्तरिक संगठनको वातावरण
संगठन को एक महत्वपूर्ण सुविधा आन्तरिक वातावरण उपस्थिति छ। उनको परंपरागत लक्ष्य, उद्देश्य, संगठनात्मक संरचना, मानव संसाधन र प्रविधिको समावेश गर्नुहोस्। आन्तरिक वातावरण - एक चल्ने संरचना, यो अत्यधिक स्थिति मा निर्भर छ देखि। औपचारिक संगठन सिस्टम तिनीहरूले कागजातहरू मा बाहिर सेट र नियमहरू द्वारा निर्देशित छन् आफ्नो गतिविधिमा नेतृत्व स्थापित समूह मिलेर बनेको छ। आन्तरिक वातावरण यस पक्षमा सामान्यतया संगठनको कर्पोरेट संस्कृति को तत्व भनिएको छ। यस मामला मा औपचारिक समूह परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर initiator प्रबन्धक छ। अनौपचारिक समूह पनि आन्तरिक वातावरण को भाग हो, तर एक कम हदसम्म आफ्नो गतिविधिहरु predetermined र नियमन छ। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका संचार, स्नेह र सम्बन्ध, को काम समूह को मनोवैज्ञानिक जलवायु भनिन्छ के द्वारा प्ले छ।
संगठन भित्र औपचारिक र अनौपचारिक समूह
संगठन, विशेष गरी ठूलो व्यक्तिहरूलाई, को जटिल संरचना फरक कार्यहरू लागि सानो काम समूह भित्र चयन समावेश छ। तिनीहरूले औपचारिक वा अनौपचारिक हुन सक्छ। औपचारिक समूह को भूमिका निर्देश पुस्तिका मा औद्योगिक र व्यावसायिक समस्या समाधान गर्न छ। यस्तो समूह एक परियोजना सिर्जना गर्न, उदाहरणका लागि, कुनै पनि काम को अवधि लागि हो। आफ्नो गतिविधिहरु जस्तै जो शक्ति र चुनौती आवंटित आदेश, रूपमा कागजातहरू द्वारा नियमन छन्। तर ठूलो कम्पनीहरु सधैं स्वभाविक र अनौपचारिक संगठन हो। यस्तो समूह को उदाहरण कुनै पनि बोट पाउन सकिन्छ। तिनीहरूले व्यक्तिगत रुचि र चासो को आधारमा spontaneously गुना। तिनीहरूले पनि र्याली टीम, फारम रूपमा, संगठन मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह र संगठनमा एक जलवायु कायम, कर्पोरेट संस्कृति को सुधार गर्न योगदान।
अवधारणा र समूह नेता को भूमिका
नेताहरू आधारित यसको सञ्चालन मा अनौपचारिक र औपचारिक संस्थाहरूको। अवधारणा को नेता यो मानिस विशेष मनोवैज्ञानिक विशेषताहरु र गुणहरू अस्तित्व presupposes। नेता - समूह को भरोसा possessing एक व्यक्ति, यो अधिकार हुनुपर्छ। औपचारिक समूह मा आधिकारिक एक नेता छ जो, अनौपचारिक समूह मा एक कार्यकारी नियुक्त गर्नुभएको छ भने सधैं किनभने आफ्नो व्यक्तिगत गुणहरू यस भूमिका लागि मनोनीत भएको छ एक नेता छ। समूह को नेता मान्छे सँगै ल्याउँछ र कुनै पनि कार्य प्रतिबद्ध गर्न उत्प्रेरित गर्छ, त्यो दबाब तिनीहरूलाई, कर्मचारीहरु स्वेच्छाले आफ्नो शक्ति प्रत्यायोजित किनभने राख्नु पर्छ। आधुनिक व्यवस्थापन आफ्नो शक्ति स्रोत समूह मा परेर, नेतृत्व नियन्त्रण गर्न सुझाव दिन्छ।
औपचारिक संगठनको व्यवस्थापन
योजना, संगठन, नियन्त्रण, प्रेरणा र समन्वय: संगठन को औपचारिक व्यवस्थापन व्यवस्थापन को परम्परागत कार्यहरु आधारित छ। यस्तो संगठनों मा, निर्धारण कारक उत्पादन श्रृंखला प्रत्येक कर्मचारी गर्न आवंटन जो श्रम को विभाजन छ। सरकारी संगठन, उदाहरणका लागि, काम वर्णन, धेरै स्पष्ट काम, शक्ति, अधिकार र विभिन्न कर्मचारी को जिम्मेवारी को स्कोप निर्दिष्ट छन् जो को आधार मा सञ्चालन। यस्तो collectives मा व्यवस्थापन भूमिका प्रदर्शन गर्ने निर्णय गर्नु हुँदैन, यो निर्देशन प्राप्त मानिन्छ छैन, एकदमै उच्च छ। औपचारिक समूह जिम्मेवारी लिन शक्ति हुनेछ जसले एक नेता आवश्यक छ। कारण यसको औपचारिक संगठन ogrstrukturoy, उद्देश्य, स्कोप, fakotrami आन्तरिक र बाह्य वातावरणमा व्यवस्थापन।
को अनौपचारिक समूह व्यवस्थापन
सामाजिक जडानहरू र सम्बन्ध - अनौपचारिक सामाजिक संगठन यसलाई शक्ति को विशिष्ट वर्गीकरणका, मुख्य कुरा यहाँ छैन, एक निश्चित स्वतन्त्रता presupposes। एक समूह जस्तै को व्यवस्थापन बाहिर धेरै दिशामा, तेर्सो, माथि तल र माथिबाट तल लगे छ। संगठन को अनौपचारिक व्यवस्थापन गर्ने औपचारिक नेताहरूले पूरा हुन सक्छ, तर थप अक्सर reins राय नेताहरूले, समूह को अधिकार संग endowed दिइएको हो। यी संस्थाहरूको मा, तपाईं अक्सर व्यवस्थापन प्रभाव र प्रभाव को मनोवैज्ञानिक विधिहरू को माध्यम द्वारा बाहिर छ निर्देशन र आदेश को रूप मा परिचित व्यवस्थापन उपकरण प्रयोग गर्न सक्दैन। अनौपचारिक समूह प्रबन्ध cohesion र समूह आकार, स्थिति र संरचना मा निर्भर गर्दछ।
परोपकारी कोष Chulpan Khamatova र Dina Korzun: सबैलाई मदत गर्न सक्छ!
एक गतिशील प्रणाली रूपमा समाज के characterizes? आधारभूत कुरा
आर्कटिक परिषद: गतिविधिहरु र देशहरूको संरचना
दबाइ 'Sumamed': निर्देशन बच्चाहरु को लागि
बेल संग छोटकरीमा - मौसम सबैभन्दा साहसी निर्णय
धेरै भेरिएसनहरूमा मा दाल सूप लागि एक सरल नुस्खा
भूमि cadastral मान। के हामी जान्नु आवश्यक?
विषय "मेरो स्कूल" मा एक निबंध: रोचक लेख्न कसरी
यो प्रत्यय "टेलिफोन": "रूप" को प्रत्यय र को को अन्त शब्दहरू उदाहरण। "रूप" को प्रत्यय र साथ शब्द शून्य-बर्खास्त
रंग "बुरगुण्डी" के हो?